ဒါဖတ်ပြီးမှ ကိုရီးယားမှာ အလုပ်သွားလုပ်ဖို့ စဉ်းစားပါ။ - Baganthar
သင်တန်း ကြော်ညာတစ်ခု တွေ့မိသည် –
( အနည်းဆုံး အခြေခံ လစာ မြန်မာငွေ၁၉သိန်းကျော်မှ သိန်း ၃၀ အထက် ရရှိနိုင်သည်! ကိုးရီးယားတွင် E-9 visaဖြင့် အစိုးရ တရားဝင် အလုပ် လုပ်ကိုင်နိုင်သော အခွင့်အရေး ရှိနေပါပြီ! )
ရုတ်တရက်ဆို ဟုတ်တုတ်တုတ်ပါ ။
ကိုရီးယားကို အလုပ်လာလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြသည့် မြန်မာပြည်ရှိ ညီကိုငယ်များကို သေချာ နားလည်နိုင်ဖို့ သေချာတဲ့ အရာတစ်ခုကို ပြောပြချင်ပါသည် ။
အဲဒါကတော့ ကိုရီးယားကို လာဖို့ ပြင်ဆင်ရတာ အင်မတန်လွယ်သည်။ တစ်ကယ် ထွက်လာရဖို့တော့ မလွယ်ပါ ။ ရောက်လာ ရင် ပိုမလွယ်တော့ပါ ။
အဲဒီ စကားကို အကျယ်ရှင်းရမည်ဆိုပါက ကိုရီးယားကို လာဖို့ ပြင်ဆင်ရတာ လွယ်သည် ဆိုတာက နီးစပ်ရာ သင်တန်းကျောင်း တစ်ခုမှာ သင်တန်းကြေးပေး သင်တန်းတက်လိုက်တာနဲ့ .. သင်ဟာ ကိုရီးယားကို သွားဖို့ ပြင်ဆင် နေသူ အော်တိုမက်တစ် ဖြစ်သွားပါပြီ။ အင်မတန်လွယ်တယ်နော် ။
အဲဒီလို သင်တန်းလေး တက်ရုံနဲ့ ကိုရီးယားကို သွားရဖို့ သေချာသလား ? အဲဒါ နဖူးပေါ်လက်တင် စဉ်းစားဖို့တောင် မလိုပါ။ ဘယ်လိုမှ မလွယ်ပါဘူး ။
ကိုရီးယားသွားဖို့ အဲလို ခပ်လွယ်လွယ်နဲ့ ပြင်ဆင်တဲ့လူ များလေလေ .. ကိုယ့်အတွက် ကိုရီးယား သွားရဖို့ဟာ
အခွင့်အရေး နဲလေလေ ဖြစ်မှာပါပဲ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုရီးယားကို အလုပ်သမား ခေါ်တာဟာ လူအရေအတွက် အကန့်အသတ်နဲ့ ခေါ်တာ ဖြစ်လို့ပါပဲ ။
စာမေးပွဲအောင်တိုင်း လာလို့ရတာ မဟုတ်ပါ ။ စာကျိုးစားလို့ .. စာမေးပွဲ ဖြေနိုင်တဲ့လူ များရင် စာမေးပွဲ အောင်မှတ်ဟာ တက်လာမှာပါပဲ ။ စီဘီတီဆို ပိုဆိုးပါတယ် ။ ခေါ်မယ့်လူအရေအတွက်က အယောက် ၁၀၀ ဆိုပါတော့ ။ ဖြေတဲ့လူက အယောက် တစ်ထောင်ဖြစ်နေရင် အဲဒီ အယောက်တစ်ထောင်ထဲမှာ စာတော်သူများနေလို့ စာမေးပွဲ ပေးမှတ်က အမှတ် ၁၀၀ ပေးတာမှာ လူပေါင်း ၉၀၀ လောက်က အရမ်းတွေ တော်ပြီး ၉၅ မှတ်အထိ ရနေပြီး ကျန်တဲ့ အယောက် ၁၀၀ ဟာ
အမှတ်ပြည့်တွေဆိုလို့ကတော့ .. ဘာမှမေးမနေနဲ့ အဲဒီအပတ်စဉ် စာမေးပွဲမှာ အောင်မှတ်ကို ၉၆ မှတ်ကနေ
ဖြတ်မှာ သေချာပါတယ် ။
အဲဒီမှာ .. မကျေမနပ်နဲ့ အောင်မှတ်ဖြတ်တာ များလိုက်တာ ဘာညာ ကြေကွဲဒေါသ ထွက်နေတဲ့လူဟာ ဖြစ်စဉ်ကို
နားမလည်လို့ပါပဲ ။ အကယ်၍ မြန်မာကို အယောက် ၁၀၀ ခေါ်မှာကို လူအယောက် တစ်ထောင် ဝင်ဖြေလို့ .. အမှတ် ၅၀ ကျော်တာ ဆယ်ယောက်တောင် မရှိဘူးဆို .. အောင်မှတ် သတ်မှတ်ချက် လျော့လာမှာပေါ့ ။ ဒါ ဘာမှ ထူးဆန်းတာမှ မဟုတ်တာ ။
အဲတော့ .. ကိုရီးယား လာရဖို့ လွယ်သလား ခက်သလား ? လက်ရှိ အခြေအနေတွေနဲ့ ချိန်ထိုးစဉ်းစားကြစေချင်ပါတယ် ။ တစ်ကယ်တော့ .. စာမေးပွဲ ဖြေနိုင်တဲ့လူတိုင်းကို စာမေးပွဲ အအောင်ပေးတာ မဟုတ်သလို .. စာမေးပွဲ အောင်တိုင်းလည်း
အလုပ်ခေါ်စာ ချပေးတာ မဟုတ်ပါ ။
လူအရေအတွက် .. ခွဲတမ်း သတ်မှတ်ပြီး ခေါ်တာဖြစ်လို့ သင်တန်းတက်ရတာ လွယ်တယ် .. ပြင်ဆင်ရတာ လွယ်တယ်
သွားရဖို့တော့ မလွယ်ပါ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဖြေတဲ့လူ များနေလို့ပါပဲ ။
ဖြေတဲ့လူများရင် .. အောင်တဲ့လူ နဲမယ် .. သွားရတာ ခက်မယ်။ ဖြေတဲ့လူ နဲရင် .. ဖြေသမျှလူ အောင်မယ် .. သွားရတာ လွယ်မယ်။ ဒါကြောင့် .. ကိုယ့် ပါတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို တွေ့ရင်
ကိုရီးယား မသွားကြနဲ့ .. မကောင်းဘူးလို့ပြောပါ ။
ပိုက်ဆံကုန်တယ် သင်တန်းကြေး အလှူပေးသလိုဖြစ်ပြီး သင်တန်းဆရာတွေပဲ ချမ်းသာသွားမှာလို့ တရားဟောပါ။ကိုရီးယားမှာ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဒုက္ခ ဆင်းရဲနဲ့ ပင်ပန်းခြင်းတွေ ၊ ဖိနှိပ်ခံရမှုတွေ ၊ လုပ်အားခ မရရှိမှုတွေ ၊ ထိခိုက်သေဆုံးရမှုတွေ အကြောင်းကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မီးမောင်းထိုးပြပါ ။
ဒါဆို .. လူတွေ ကိုရီးယား သွားဖို့ စိတ်ပျက်ပြီး တစ်ကယ် အပင်ပန်းခံနိုင်သူ .. တစ်ကယ် ဇွဲရှိသူ ၊ စိတ်ဓါတ် ခိုင်မာသူ ၊
ရည်ရွယ်ချက်ရှိသူတွေလောက်ပဲ တစ်ကယ်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြတော့မှာ သေချာပါတယ် ။
ကဲ .. သင်တန်းကျောင်းတွေ ကြော်ညာနေသလို
အနည်းဆုံး အခြေခံ လစာ မြန်မာငွေ၁၉သိန်းကျော်မှ သိန်း ၃၀ အထက် ရရှိနိုင်သည်!ဆိုတာ ဟုတ်နိုင်လား မဟုတ်နိုင်လား ဒီသတင်းကို ဖတ်ကြည့်ပါ ။
▪ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အလုပ်သင်ကာလ စနစ်ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာလဲ?
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားသည် ၂ နှစ်တာကာလ အလုပ်သင်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ကာ ပထမနှစ်တွင် ၂၀% ၊ ဒုတိယနှစ်တွင် ၁၀% ဖြင့် အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခထက် လျှော့ချ၍ ပေးချေမည့် စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင်လည်း ဥပဒေအရ၏ အနိမ့်ဆုံး အဆင့်ကို ရရှိနေပြီး ထိုအထဲကမှ ထပ်မံဖြတ်တောက်မည့်သဘော ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် တစ်လ အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခသည် သိန်း ၂၀ ဖြစ်ပါက ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားသည် ပထမနှစ်တွင် ၁၆ သိန်း ၊
ဒုတိယနှစ်တွင် ၁၈ သိန်းသာ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အနိမ့်ဆုံး လုပ်အားခသည် ယခုအထိ အားလုံးသော အလုပ်သမား များထံ တန်းတူညီမျှစွာ သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ယခုမှစ၍ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများထံ အန်ိမ့်ဆုံး
လုပ်ခကို လျှော့ချ ပေးချေနိုင်ရန် ဥပဒေကို ပြောင်းလဲမည် ဖြစ်ပါသည်။
▪အလုပ်ရှင်နှင့် လွှတ်တော်အမတ်များ ၊ အစိုးရတို့ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ ဥပဒေကို ပြောင်းလဲရန် ပြင်ဆင်နေကြပြီ
တစ်ချိန် က အခမဲ့ဖြစ်သော အဆောင်စရိတ် ၊ စားသောက်စရိတ်ကို လုပ်အားခထဲမှ ၂၀% အထိ အလုပ်ရှင်က ဖြတ်တောက် ပိုင်ခွင့်ကို အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌါနက ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ထက်ပို၍ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အလုပ်သင်ကာလ စနစ်ဖြင့် ဥပဒေကို ပြောင်းလဲပါက ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား လစာ သည် အများဆုံး ၄၀% အထိ လျော့ကျသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
တစ်လလျှင် အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ သိန်း ၂၀ ဆိုပါက ရွှေ့ပြောင်းအလုပ် သမားသည် ၁၂ သိန်းအပြင် ပို၍ ရနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ဥပဒေသာ အတည်ဖြစ်သွားပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့ချေ။ ပို၍ ပို၍ ဆိုးလာဖို့သာ ရှိပါတော့သည်။ လတ်တလော ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားထံ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခထက် လျော့နဲပေးချေမှုသာ စတင်ပါက နောင်တွင် အနိမ့်ဆုံး လုပ်အားခထဲမှ အမျိုးမျိုးသော ခေါင်းစဉ်များတပ်ကာ ဖြတ်တောက်မှုထပ်များ ထပ်တိုး ဖြစ်ပေါ်လာ တော့မှာ သေချာပါသည်။
ဒါကြောင့် သင်တန်းတွေကို ကြော်ညာကြရင်လည်း ပကတိ အရှိ အခြေအနေတွေကိုပါ ကြိုတင် အသိပေး ၊ သတိပေး ကြစေချင်ပါတယ် ။ အဆင်ပြေမယ် .. ကူညီမယ့်လူတွေ အဆင်သင့်ရှိတယ်။ အလုပ်ကလည်း ပေါတယ် .. စိတ်ချရတယ် .. လစာလည်း မတရားကောင်းတယ် .. စသဖြင့် လူတွေရဲ့ ခေါင်းထဲကို လောဘစိတ်တွေ အတင်းရိုက်ထည့်ပြီး ကိုယ့် သင်တန်း ဆီ လူလာအောင် သွေးဆောင် ဖျားယောင်းပြီး ဆွယ်တရားဟောပြီး ကြော်ညာတာမျိုး မဖြစ်ကြစေဖို့
တိုက်တွန်း လိုရင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
Credit – ခန့်နေသူတိုး (မြန်မာအတိုင်ပင်ခံ) ဘူဆန်စင်တာ 051-304-4725
ဒါဖတျပွီးမှ ကိုရီးယားမှာ အလုပျလုပျဖို့ စဉျးစားပါ။
သငျတနျး ကွျောညာတဈခု တှမေိ့သညျ –
( အနညျးဆုံး အခွခေံ လစာ မွနျမာငှေ၁၉သိနျးကြျောမှ သိနျး ၃၀ အထကျ ရရှိနိုငျသညျ! ကိုးရီးယားတှငျ E-9 visaဖွငျ့ အစိုးရ တရားဝငျ အလုပျ လုပျကိုငျနိုငျသော အခှငျ့အရေး ရှိနပေါပွီ! )
ရုတျတရကျဆို ဟုတျတုတျတုတျပါ ။
ကိုရီးယားကို အလုပျလာလုပျဖို့ ပွငျဆငျနကွေသညျ့ မွနျမာပွညျရှိ ညီကိုငယျမြားကို သခြော နားလညျနိုငျဖို့ သခြောတဲ့ အရာတဈခုကို ပွောပွခငျြပါသညျ ။
အဲဒါကတော့ ကိုရီးယားကို လာဖို့ ပွငျဆငျရတာ အငျမတနျလှယျသညျ။ တဈကယျ ထှကျလာရဖို့တော့ မလှယျပါ ။ ရောကျလာ ရငျ ပိုမလှယျတော့ပါ ။
အဲဒီ စကားကို အကယျြရှငျးရမညျဆိုပါက ကိုရီးယားကို လာဖို့ ပွငျဆငျရတာ လှယျသညျ ဆိုတာက နီးစပျရာ သငျတနျးကြောငျး တဈခုမှာ သငျတနျးကွေးပေး သငျတနျးတကျလိုကျတာနဲ့ .. သငျဟာ ကိုရီးယားကို သှားဖို့ ပွငျဆငျ နသေူ အျောတိုမကျတဈ ဖွဈသှားပါပွီ။ အငျမတနျလှယျတယျနျော ။
အဲဒီလို သငျတနျးလေး တကျရုံနဲ့ ကိုရီးယားကို သှားရဖို့ သခြောသလား ? အဲဒါ နဖူးပျေါလကျတငျ စဉျးစားဖို့တောငျ မလိုပါ။ ဘယျလိုမှ မလှယျပါဘူး ။
ကိုရီးယားသှားဖို့ အဲလို ခပျလှယျလှယျနဲ့ ပွငျဆငျတဲ့လူ မြားလလေေ .. ကိုယျ့အတှကျ ကိုရီးယား သှားရဖို့ဟာ
အခှငျ့အရေး နဲလလေေ ဖွဈမှာပါပဲ ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကိုရီးယားကို အလုပျသမား ချေါတာဟာ လူအရအေတှကျ အကနျ့အသတျနဲ့ ချေါတာ ဖွဈလို့ပါပဲ ။
စာမေးပှဲအောငျတိုငျး လာလို့ရတာ မဟုတျပါ ။ စာကြိုးစားလို့ .. စာမေးပှဲ ဖွနေိုငျတဲ့လူ မြားရငျ စာမေးပှဲ အောငျမှတျဟာ တကျလာမှာပါပဲ ။ စီဘီတီဆို ပိုဆိုးပါတယျ ။ ချေါမယျ့လူအရအေတှကျက အယောကျ ၁၀၀ ဆိုပါတော့ ။ ဖွတေဲ့လူက အယောကျ တဈထောငျဖွဈနရေငျ အဲဒီ အယောကျတဈထောငျထဲမှာ စာတျောသူမြားနလေို့ စာမေးပှဲ ပေးမှတျက အမှတျ ၁၀၀ ပေးတာမှာ လူပေါငျး ၉၀၀ လောကျက အရမျးတှေ တျောပွီး ၉၅ မှတျအထိ ရနပွေီး ကနျြတဲ့ အယောကျ ၁၀၀ ဟာ
အမှတျပွညျ့တှဆေိုလို့ကတော့ .. ဘာမှမေးမနနေဲ့ အဲဒီအပတျစဉျ စာမေးပှဲမှာ အောငျမှတျကို ၉၆ မှတျကနေ
ဖွတျမှာ သခြောပါတယျ ။
အဲဒီမှာ .. မကမြေနပျနဲ့ အောငျမှတျဖွတျတာ မြားလိုကျတာ ဘာညာ ကွကှေဲဒေါသ ထှကျနတေဲ့လူဟာ ဖွဈစဉျကို
နားမလညျလို့ပါပဲ ။ အကယျ၍ မွနျမာကို အယောကျ ၁၀၀ ချေါမှာကို လူအယောကျ တဈထောငျ ဝငျဖွလေို့ .. အမှတျ ၅၀ ကြျောတာ ဆယျယောကျတောငျ မရှိဘူးဆို .. အောငျမှတျ သတျမှတျခကျြ လြော့လာမှာပေါ့ ။ ဒါ ဘာမှ ထူးဆနျးတာမှ မဟုတျတာ ။
အဲတော့ .. ကိုရီးယား လာရဖို့ လှယျသလား ခကျသလား ? လကျရှိ အခွအေနတှေနေဲ့ ခြိနျထိုးစဉျးစားကွစခေငျြပါတယျ ။ တဈကယျတော့ .. စာမေးပှဲ ဖွနေိုငျတဲ့လူတိုငျးကို စာမေးပှဲ အအောငျပေးတာ မဟုတျသလို .. စာမေးပှဲ အောငျတိုငျးလညျး
အလုပျချေါစာ ခပြေးတာ မဟုတျပါ ။
လူအရအေတှကျ .. ခှဲတမျး သတျမှတျပွီး ချေါတာဖွဈလို့ သငျတနျးတကျရတာ လှယျတယျ .. ပွငျဆငျရတာ လှယျတယျ
သှားရဖို့တော့ မလှယျပါ ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဖွတေဲ့လူ မြားနလေို့ပါပဲ ။
ဖွတေဲ့လူမြားရငျ .. အောငျတဲ့လူ နဲမယျ .. သှားရတာ ခကျမယျ။ ဖွတေဲ့လူ နဲရငျ .. ဖွသေမြှလူ အောငျမယျ .. သှားရတာ လှယျမယျ။ ဒါကွောငျ့ .. ကိုယျ့ ပါတျဝနျးကငျြက လူတှကေို တှရေ့ငျ
ကိုရီးယား မသှားကွနဲ့ .. မကောငျးဘူးလို့ပွောပါ ။
ပိုကျဆံကုနျတယျ သငျတနျးကွေး အလှူပေးသလိုဖွဈပွီး သငျတနျးဆရာတှပေဲ ခမျြးသာသှားမှာလို့ တရားဟောပါ။ကိုရီးယားမှာ အမှနျတကယျ ဖွဈပကျြနတေဲ့ ဒုက်ခ ဆငျးရဲနဲ့ ပငျပနျးခွငျးတှေ ၊ ဖိနှိပျခံရမှုတှေ ၊ လုပျအားခ မရရှိမှုတှေ ၊ ထိခိုကျသဆေုံးရမှုတှေ အကွောငျးကို ကှကျကှကျကှငျးကှငျး မီးမောငျးထိုးပွပါ ။
ဒါဆို .. လူတှေ ကိုရီးယား သှားဖို့ စိတျပကျြပွီး တဈကယျ အပငျပနျးခံနိုငျသူ .. တဈကယျ ဇှဲရှိသူ ၊ စိတျဓါတျ ခိုငျမာသူ ၊
ရညျရှယျခကျြရှိသူတှလေောကျပဲ တဈကယျသှားဖို့ ဆုံးဖွတျကွတော့မှာ သခြောပါတယျ ။
ကဲ .. သငျတနျးကြောငျးတှေ ကွျောညာနသေလို
အနညျးဆုံး အခွခေံ လစာ မွနျမာငှေ၁၉သိနျးကြျောမှ သိနျး ၃၀ အထကျ ရရှိနိုငျသညျ!ဆိုတာ ဟုတျနိုငျလား မဟုတျနိုငျလား ဒီသတငျးကို ဖတျကွညျ့ပါ ။
▪ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမား အလုပျသငျကာလ စနဈဆိုတာ ဘာကိုချေါတာလဲ?
ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားသညျ ၂ နှဈတာကာလ အလုပျသငျအဖွဈ လုပျကိုငျကာ ပထမနှဈတှငျ ၂၀% ၊ ဒုတိယနှဈတှငျ ၁၀% ဖွငျ့ အနိမျ့ဆုံးလုပျအားခထကျ လြှော့ခြ၍ ပေးခမြေညျ့ စနဈဖွဈပါသညျ။ လကျရှိတှငျလညျး ဥပဒအေရ၏ အနိမျ့ဆုံး အဆငျ့ကို ရရှိနပွေီး ထိုအထဲကမှ ထပျမံဖွတျတောကျမညျ့သဘော ဖွဈပါသညျ။
ဥပမာအားဖွငျ့ တဈလ အနိမျ့ဆုံး လုပျခသညျ သိနျး ၂၀ ဖွဈပါက ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားသညျ ပထမနှဈတှငျ ၁၆ သိနျး ၊
ဒုတိယနှဈတှငျ ၁၈ သိနျးသာ ရရှိမညျဖွဈပါသညျ။ အနိမျ့ဆုံး လုပျအားခသညျ ယခုအထိ အားလုံးသော အလုပျသမား မြားထံ တနျးတူညီမြှစှာ သတျမှတျထားခဲ့ပါသညျ။ သို့သျော ယခုမှစ၍ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြားထံ အနိမျ့ဆုံး
လုပျခကို လြှော့ခြ ပေးခနြေိုငျရနျ ဥပဒကေို ပွောငျးလဲမညျ ဖွဈပါသညျ။
▪အလုပျရှငျနှငျ့ လှတျတျောအမတျမြား ၊ အစိုးရတို့ အနိမျ့ဆုံးလုပျခ ဥပဒကေို ပွောငျးလဲရနျ ပွငျဆငျနကွေပွီ
တဈခြိနျ က အခမဲ့ဖွဈသော အဆောငျစရိတျ ၊ စားသောကျစရိတျကို လုပျအားခထဲမှ ၂၀% အထိ အလုပျရှငျက ဖွတျတောကျ ပိုငျခှငျ့ကို အလုပျသမားဝနျကွီးဌါနက ခှငျ့ပွုခဲ့ပွီး ဖွဈပါသညျ။ ထို့ထကျပို၍ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမား အလုပျသငျကာလ စနဈဖွငျ့ ဥပဒကေို ပွောငျးလဲပါက ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမား လစာ သညျ အမြားဆုံး ၄၀% အထိ လြော့ကသြှားမညျ ဖွဈပါသညျ။
တဈလလြှငျ အနိမျ့ဆုံးလုပျခ သိနျး ၂၀ ဆိုပါက ရှပွေ့ောငျးအလုပျ သမားသညျ ၁၂ သိနျးအပွငျ ပို၍ ရနိုငျမညျ မဟုတျပါ။ ဥပဒသော အတညျဖွဈသှားပါက ပွနျလညျပွငျဆငျရနျ မဖွဈနိုငျတော့ခြေ။ ပို၍ ပို၍ ဆိုးလာဖို့သာ ရှိပါတော့သညျ။ လတျတလော ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားထံ အနိမျ့ဆုံးလုပျခထကျ လြော့နဲပေးခမြှေုသာ စတငျပါက နောငျတှငျ အနိမျ့ဆုံး လုပျအားခထဲမှ အမြိုးမြိုးသော ခေါငျးစဉျမြားတပျကာ ဖွတျတောကျမှုထပျမြား ထပျတိုး ဖွဈပျေါလာ တော့မှာ သခြောပါသညျ။
ဒါကွောငျ့ သငျတနျးတှကေို ကွျောညာကွရငျလညျး ပကတိ အရှိ အခွအေနတှေကေိုပါ ကွိုတငျ အသိပေး ၊ သတိပေး ကွစခေငျြပါတယျ ။ အဆငျပွမေယျ .. ကူညီမယျ့လူတှေ အဆငျသငျ့ရှိတယျ။ အလုပျကလညျး ပေါတယျ .. စိတျခရြတယျ .. လစာလညျး မတရားကောငျးတယျ .. စသဖွငျ့ လူတှရေဲ့ ခေါငျးထဲကို လောဘစိတျတှေ အတငျးရိုကျထညျ့ပွီး ကိုယျ့ သငျတနျး ဆီ လူလာအောငျ သှေးဆောငျ ဖြားယောငျးပွီး ဆှယျတရားဟောပွီး ကွျောညာတာမြိုး မဖွဈကွစဖေို့
တိုကျတှနျး လိုရငျး ဖွဈပါတယျ ။
Credit – ခနျ့နသေူတိုး (မွနျမာအတိုငျပငျခံ) ဘူဆနျစငျတာ 051-304-4725
မတော်တဆ လည်ချောင်းမှာ ငါးအရိုးစူးလျှင် ဒါတွေလုပ် လိုက်ပါ ….